Nhau - Itsva Kusvika isina mweya bhodhoro- Nei uchienda usina mweya kune ako ekushongedza ekurongedza?
New Arrival isina mweya bhodhoro- Nei uchienda usina mweya kune ako ekushongedza ekurongedza?
Mabhodhoro emapombi asina mweya anodzivirira zvigadzirwa zvakaomarara senge mafuta echisikigo ekuchengetedza ganda, maseramu, nheyo, uye mamwe mafuta ekuchengetedza mafomura nekuadzivirira kubva pakuratidzika zvakanyanya mumhepo, nokudaro kuwedzera chigadzirwa pasherufu hupenyu kusvika pa15% zvimwe. Izvi zvinoita kuti tekinoroji isina mweya ive ramangwana idzva rerunako, zvekurapa, uye zvekurongedza.
Bhodhoro risina mweya harina chubhu yekudhira, asi pane diaphragm iyo inomuka kuendesa chigadzirwa. Kana mushandisi achidzvinyirira pombi, inogadzira iyo yekuzorora mhedzisiro, kudhirowa chigadzirwa kumusoro. Vatengi vanogona kushandisa chingangove chiri chose chechigadzirwa pasina marara akasara uye ivo havafanirwe kunetseka nezve kukakavara kunowanzo kuuya neyakajairwa pombi uye yekushongedza kurongedza.
Kuwedzera pakudzivirira fomura yako uye nekuwedzera hupenyu hwayo pasherefu, mabhodhoro asina mweya anopawo bhenefiti yekumaka. Iyo yepamusoro-yekupedzisira kurongedza mhinduro inouya nemhando dzakasiyana dhizaini kuti usangane neako aesthetic Positioning.
Kupakira chinhu chakakosha mumasikisi ekuzora uye pefiyumu. Kuisa mumaindasitiri aya hakuna hukama chete nekuchengeteka uye dziviriro, asi zvakare zvine chekuita nekuona kuti zvigadzirwa zvinoramba zviri mumamiriro azvo panguva yekutakura nekuchengetedza. Kukosha kuri kuwedzera kwekushambidzika kwemunhu, pamwe nezvinodiwa zvinokura zvemireniyamu, zvakamanikidza makambani mazhinji emafuta ekuzora kuti awane zvido zvemusika wemuno. Semuenzaniso, All Good Scents, yemhando yepamusoro pefiyumu kambani iri muAhmedabad, yakavambwa muna 2014. Kambani iyi yakaunza zvinhu zvayo zvemhando yepamusoro kumusika wemuno ndokunyora 40% yecheni-pamusoro-pavhareji kukura kwekutengesa muna 2016.
MuUnited States, kuwedzera kuri kuwedzera kwehunyanzvi hwemberi hwekugadzira zvipfeko uye kukura kwemaitiro ekuchengetedza ganda zvigadzirwa ndezvimwe zvezvinhu zvakakosha zvinotyaira musika kukura. Kuchengetedzwa kwembambo uye zvigadzirwa zvemafuta zvinoratidzika kunge zviri kunyanya kunetsa vatengi nevatengesi munyika. Nekuda kwekuwedzera kwekuda kwezvizoro, vazhinji vezvizoro vatengesi vari kutorawo nekuvandudza girazi gadziriso mhinduro kugadzirisa hunhu hwevatengi uye kugadzirisa chigadzirwa chengetedzo.
Ziso Cream Jar, Zvizorwa Poda Container Ine Sifter, Zvizorwa Cream Midziyo, Zvizorwa Cream chirongo, Cream zvirongo zvizorwa kavha, Nhema Bhodhoro Gel Polish,